विन्डोज १० ल्यापटप भनिरहेको छ तर चार्ज गरिरहेको छैन? यी समाधानहरू प्रयास गर्नुहोस् - विन्डोज १०
विन्डोज १० ल्यापटप भनिरहेको छ तर चार्ज गरिरहेको छैन? यी समाधानहरू प्रयास गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग ल्यापटप छ र तपाईंको सबै काम तपाईंको ल्यापटपमा बचत गरिएको छ भने, तपाईंको ल्यापटपको साथ एउटा सानो समस्याले तपाईंलाई ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ। सबै फरक ल्यापटप समस्याहरूबाट, सामान्य समस्याहरू मध्ये एक हो जब ल्यापटप प्लग इन गरिएको छ, तर यसले चार्ज गरिरहेको छैन । यदि तपाईं यस समस्याको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं चिन्ता लिनुहुन्न किनकि यो धेरै सामान्य समस्या हो र त्यहाँ निराकरण गर्न धेरै विभिन्न विधिहरू छन् ल्यापटप चार्ज भएन समस्या विन्डोज १० उपलब्ध छ।
सामग्रीहरू देखाउनु १ किन ल्यापटप चार्ज भइरहेको छैन दुई ल्यापटपमा विन्डोज १० चार्ज नभएको प्लग इन गरियो २.१ तपाईंको ल्यापटप पावर रिसेट गर्नुहोस् २.२ ब्याट्री चालक अपडेट गर्नुहोस् २.3 पावर व्यवस्थापन सेटिंग्ससँग खेल्नुहोस् २.4 तपाईंको ल्यापटप BIOS अपडेट गर्नुहोस् २. कुनै पनि शॉर्ट्स, ब्रेक वा बर्नआउटको लागि जाँच गर्नुहोस् २.6 डीसी ज्याक मार्फत जानुहोस् २.7 टेस्ट ल्यापटप ब्याट्री २.8 तपाईको ब्याट्री परिवर्तन गर्नुहोस्
किन ल्यापटप चार्ज भइरहेको छैन
प्राय जसो ब्याट्रीमा खराबीको परिणाम 'ल्यापटप प्लग इन भए तर चार्ज गरिएन' समस्याको परिणाम दिन्छ। फेरि यदि तपाईंको ब्याट्री चालक हराइरहेको छ वा पुरानो हो, तपाईं आफ्नो ल्यापटप चार्ज गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। केहि समय एक गल्ती शक्ति एडेप्टर (चार्जर) वा यदि तपाईंको पावर केबल बिग्रिएको छ भने पनि यस्तै समस्या उत्पन्न गर्दछ। कुनै पनि समस्या निवारण चरणहरू प्रदर्शन गर्नु अघि हामी विभिन्न पावर एडेप्टर (चार्जर) कोशिस गर्न सिफारिस गर्दछौं, इलेक्ट्रिकल प्लगइन पोइन्ट परिवर्तन गर्नुहोस्।
ल्यापटपमा विन्डोज १० चार्ज नभएको प्लग इन गरियो
जब तपाईं यस समस्याको सामना गर्नुहुन्छ तब तपाईं चार्ज आइकनमा परिवर्तन देख्न सक्नुहुनेछ जसले सating्केत गर्दछ कि चार्जर प्लग इन गरिएको छ र अनौठो कुरा भनेको ब्याट्री चार्ज भइरहेको छैन। तपाईं ब्याट्री स्थिति शून्य हुन पाउनुहुनेछ, ल्यापटप चार्जिंगको लागि लगातार प्लग भइसकेपछि पनि। यो आतंकित स्थिति छिटो निम्न तरिकाहरूको सहायताले फिक्स गर्न सकिन्छ -
तपाईंको ल्यापटप पावर रिसेट गर्नुहोस्
एक पावर रिसेट तपाईको ल्यापटप मेमोरी खाली गर्दछ जुन तपाईको ब्याट्री मुद्दा फिक्स गर्नका लागि उपयोगी छ। हामी भन्न सक्दछौं कि यो सब भन्दा साधारण र सजिलो चाल हो जुन तपाईंले कुनै अन्य विधि प्रयोग गर्नु अघि प्रयास गर्नुपर्दछ।
अस्थिर वाईफाई कनेक्शन विन्डोज १०
सबै भन्दा पहिले तपाईको ल्यापटप पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुहोस्
तपाईंको ल्यापटपबाट पावर केबल विच्छेद गर्नुहोस्।
प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंको ल्यापटपबाट ब्याट्री हटाउनुहोस्
र त्यसपछि तपाईंको सबै USB उपकरणहरू अनप्लग गर्नुहोस् जुन हाल तपाईंको ल्यापटपमा जडित छन्।
१ laptop सेकेन्डको लागि तपाईको ल्यापटपको पावर बटन थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्, त्यसपछि यसलाई रिलीज गर्नुहोस्।
तपाईको ल्यापटपमा फेरि ब्याट्री घुसाउनुहोस्।
अब फेरि तपाईको ब्याट्री चार्ज गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
धेरै जसो समय, यो समाधान तपाइँको लागि समस्या समाधान गर्दछ।
ब्याट्री चालक अपडेट गर्नुहोस्
तपाईको ल्यापटपमा हराइरहेको वा पुरानो ब्याट्री ड्राइभर, विशेष गरी विन्डोज १०० 190 ०० update अपडेट पछि पनि 'ल्यापटपमा चार्ज गरिएन' मुद्दाको कारण हुन्छ। त्यसोभए तपाईले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईको ब्याट्री चालक मितिमा छ। र अर्को चरण जुन तपाईं कुनै चार्जिंग समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको ब्याट्री ड्राइभ अपडेट गर्नु हो। यसका लागि,
विन्डोज + आर, किबोर्ड सर्टकट टाइप गर्नुहोस् devmgmt.msc र ठीक क्लिक गर्नुहोस्
यसले तपाईंलाई लिन्छ उपकरण प्रबन्धक ती सबै स्थापित उपकरण ड्राइभर सूची,
यहाँ ब्याट्री विस्तार गर्नुहोस्
त्यसपछि दायाँ क्लिक गर्दै Microsoft ACPI अनुरूप नियंत्रण विधि ब्याट्री र त्यसपछि ड्राइभर सफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस्।
यदि कुनै ड्राइभर अपडेटहरू उपलब्ध छैनन् भने तपाईं दायाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ माईक्रोसफ्ट एसीपीआई- अनुरूप नियंत्रण विधि बैटरी र चयन गर्नुहोस् उपकरणको स्थापना हटाउनुहोस् ।
तपाईंको ल्यापटप बन्द गर्नुहोस् र AC एडेप्टर विच्छेदन गर्नुहोस् ।
तपाईंको ल्यापटप ब्याट्री हटाउनुहोस्, प्रेस गर्नुहोस् र button० सेकेन्डको लागि पावर बटन होल्ड गर्नुहोस् र त्यसपछि पावर बटन रिलीज गर्नुहोस्।
तपाईंको ब्याट्री फिर्ता राख्नुहोस् र तपाईंको ल्यापटपमा चार्जर प्लग गर्नुहोस् र तपाईंको ल्यापटपमा पावर गर्नुहोस्।
जब तपाइँ तपाइँको विन्डोज प्रणालीमा साइन इन गर्नुहुन्छ, माईक्रोसफ्ट एसीपीआई- अनुरूप नियंत्रण विधि बैटरी स्वचालित रूपमा पुनर्स्थापित हुनेछ।
यदि स्थापना गरिएको छैन भने devmgmt.msc प्रयोग गरेर उपकरण प्रबन्धक खोल्नुहोस्,
त्यसपछि ब्याट्री चयन गर्नुहोस्।
अब कार्य क्लिक गर्नुहोस् र हार्डवेयर परिवर्तनहरूका लागि स्क्यान चयन गर्नुहोस्।
केहि सेकेन्ड कुर्नुहोस् र माईक्रोसफ्ट एसीपीआई-अनुरूप नियंत्रण विधि ब्याट्री तपाईंको ल्यापटपमा पुन: स्थापना हुनेछ।
प्रिन्टर ड्राइभर स्थापना भएन। ईपोरेसन पूरा गर्न सकिएन
पावर व्यवस्थापन सेटिंग्ससँग खेल्नुहोस्
धेरै जसो भर्खरको ल्यापटपहरू, विशेष गरी विन्डोज १० ल्यापटपहरूमा नयाँ चार्जिंग प्रणाली छ जुन परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न सक्दछ। तर यो समस्या ठीक गर्न सजिलो छ, तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर प्रणालीमा ब्याट्री समय विस्तारक प्रकार्य अक्षम गर्नुपर्नेछ। तपाईंले भर्खरको आफ्नो कम्प्युटरमा पावर व्यवस्थापन सफ्टवेयर खोल्न आवश्यक छ र सामान्य मोडमा सेटिंग्स ट्रान्सफर गर्नुहोस्। कुनै ब्याट्री चार्जिंग समस्या समाधान गर्न यो निकै सजिलो छ।
पावर-सम्बन्धित सेटिंग्स परिमार्जन गर्नुहोस्
खोल्ने नियन्त्रण प्यानल, खोज्नुहोस् र पावर विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्
हालको पावर योजनाको छेउमा योजना सेटिंग्स परिवर्तन क्लिक गर्नुहोस्।
उन्नत पावर सेटिंग्स परिवर्तन क्लिक गर्नुहोस्।
तल स्क्रोल गर्नुहोस् र ब्याट्री विस्तार गर्नुहोस्, त्यसपछि रिजर्भ ब्याट्री स्तर विस्तार गर्नुहोस्।
प्लग इनको मान १००% मा सेट गर्नुहोस्।
ठीक छ क्लिक गर्नुहोस्, निस्कनुहोस्, र हेर्नुहोस् यदि यसले काम गर्दछ।
तपाईंको ल्यापटप BIOS अपडेट गर्नुहोस्
BIOS (मूल इनपुट / आउटपुट प्रणाली) क्षेत्र प्रोग्राम जुन तपाईंको अपरेटि operating प्रणाली र तपाईंको ल्यापटप हार्डवेयर उपकरणहरू बीचको जडान प्रबन्ध गर्दछ। गलत BIOS सेटिंग्सले कहिलेकाँही ल्यापटपको ब्याट्री चार्ज गर्न नसक्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ। तपाईको HP ल्यापटप ब्याट्री ठीक गर्न को लागी तपाईको ल्यापटप BIOS परिवर्तन गर्नुहोस्।
तपाइँको ल्यापटप BIOS अपडेट गर्नका लागि, ल्यापटप निर्माता साइटमा जानुहोस् र तपाइँको ल्यापटपको समर्थन पृष्ठ फेला पार्नुहोस्। त्यसोभए पछिल्लो BIOS अपडेट डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई तपाईंको पीसीमा स्थापना गर्नुहोस्।
कुनै पनि शॉर्ट्स, ब्रेक वा बर्नआउटको लागि जाँच गर्नुहोस्
तपाईंले कुनै पनि प्रकारको शॉर्ट्स, ब्रेक वा बर्नआउट्सको लागि तपाईंको चार्जिंग केबल जाँच गर्नुपर्नेछ। तपाईं आफ्नो सबै जडानहरू मार्फत पनि जानुपर्दछ र कुनै बिग्रिएको डोरी फेला पार्न प्रयास गर्नुपर्दछ। तपाईंको कर्डलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्नाले, तपाईं कुनै पनी क्षति फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको चार्जिंग केबलमा आएको हुन सक्छ जब तपाईं चल्दै हुनुहुन्छ वा तपाईंको घरपालुवा जनावरले यसलाई चबाएको छ। यदि त्यहाँ कुनै ब्रेक छ भने, त्यसपछि तपाईं यसलाई नल टेपको साथ ठीक गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले कनेक्टर्सहरूको लागि पनि जाँच गर्नुपर्नेछ जुन कहिलेकाँही ढीला र जलेको कारण ल्यापटप चार्ज नगर्ने समस्या उत्पन्न गर्दछ।
डीसी ज्याक मार्फत जानुहोस्
कहिलेकाँही तपाईंको चार्जिंग कर्ड र एडेप्टर काम गर्दैछन्, तर वास्तविक समस्या डीसी ज्याकको साथ हो। डीसी ज्याक तपाईको ल्यापटपमा एउटा सानो पावर सकेट रहेको छ जहाँ तपाई चार्जिंग केबल घुसाउनुहुन्छ, यो प्राय: पछाडि अवस्थित हुन्छ। तपाईंले जाँच गर्नु पर्छ कि यदि डीसी ज्याक चार्जरको साथ कमजोर सम्पर्कको कारण सुस्त छ भने। तपाईं यसको लागि अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि DC Jack ले राम्रो जडान बनाएको छैन भने, यो तपाईंको लागि ठूलो समस्या हुन सक्छ।
स्वचालित अपडेट विन्डोज १० घर असक्षम गर्नुहोस्
टेस्ट ल्यापटप ब्याट्री
पावर कर्ड अनप्लग गर्नुहोस् र तपाईंको ल्यापटप रिस्टार्ट गर्नुहोस्।
एक पटक ल्यापटप शक्ति माथि एक पटक, Esc कुञ्जी थिच्नुहोस्।
स्टार्ट अप मेनू देखा पर्नेछ। प्रणाली डायग्नोस्टिक्स चयन गर्नुहोस्।
डायग्नोस्टिक्स र घटक परीक्षणहरूको सूची पप अप हुनुपर्दछ। ब्याट्री परीक्षण चयन गर्नुहोस्।
फेरि पावर कर्ड प्लग इन गर्नुहोस्।
ब्याट्री टेस्ट बटन बटन क्लिक गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईंको प्रणालीले ब्याट्री परीक्षण पूरा गरेपछि तपाईले स्थिति सन्देश देख्नु पर्दछ, जस्तै ओके, क्यालिब्रेट, कमजोर, धेरै कमजोर, बदल्नुहोस्, ब्याट्री छैन, वा अज्ञात।
तपाईको ब्याट्री परिवर्तन गर्नुहोस्
यदि तपाईंले माथिका सबै छलफल गरिएका विधिहरू प्रयोग गर्नुभएको छ र कुनै कुराले तपाईंको लागि काम गरेको छैन भने तपाईं ल्यापटपको ब्याट्रीको मृत्यु भएको परिदृश्यलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। यो एक धेरै साधारण मामला हो यदि तपाईंसँग पुरानो ल्यापटप छ केही ब्याट्री स्वचालित रूपमा मरे पछि। यदि तपाईं आफ्नो ल्यापटप ब्याट्री समस्या ठीक गर्न सक्षम हुनुहुन्न, तब तपाईंसंग नयाँ विकल्पले तपाईंको ल्यापटपको ब्याट्री बदल्न विकल्प मात्र छ। जब तपाई नयाँ ल्यापटप ब्याट्री किनमेल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तब तपाईको ल्यापटप निर्माता ब्राण्डको मूल ब्याट्री डुप्लिकेट ब्याट्री सजीलो बिरोध हुन सक्छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्।
त्यसो भए, यदि तपाई विन्डोज १० मा चार्ज त्रुटिहरू नभएको ल्यापटप प्लग ठीक गर्नका लागि विधिहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईलाई आत्तिनु आवश्यक पर्दैन किनकि तपाईले यस समस्या समाधान गर्न बहुविध विधिहरू प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। केवल माथि छलफल गरिएका सात विधिहरू प्रयास गर्नुहोस् र तपाईं सजिलैसँग आफ्नो कुनै चार्जिंग ब्याट्री समस्या तुरून्त समाधान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। र, नबिर्सनुहोस् हामीसँग तपाईको अनुभव सँधै साझेदारी गर्नुहोस्।
प्रो सल्लाहहरू: कसरी ल्यापटप ब्याट्री जीवन सुधार गर्न:
पावर एडाप्टर जडान भएको बखत नोटबुक प्रयोग गर्नु राम्रो छैन
ब्याट्री पूर्ण चार्ज भए पछि पनि पावर एडेप्टर प्लगमा राख्न सल्लाह दिइदैन
तपाईंले फेरि चार्ज गर्नु अघि ब्याट्री पूर्ण रूपले ड्रेन गर्न आवश्यक छ
पावर प्लान विस्तारित ब्याट्री जीवनको लागि सही सेट गर्नुपर्दछ
कृपया स्क्रिन ब्राइटनेसलाई तल्लो तहमा राख्नुहोस्
प्रयोगमा नहुँदा जहिले पनि वाइफाइ जडान बन्द गर्नुहोस्
साथै, CD / DVD को अप्टिकल ड्राइभबाट हटाउनुहोस् जब प्रयोगमा छैन
विन्डोज १० ल्यापटप ओभरहीटिंग वा शटडाउन मुद्दाहरू फिक्स गर्नुहोस्
प्लग इन भए पनि ल्यापटप अन हुँदैन? यी समाधानहरू प्रयास गर्नुहोस्
विन्डोज १० को लागि Best उत्तम पासवर्ड प्रबन्धक
के विन्डोज १० कम्प्युटर अप्रत्याशित रूपमा फेरि सुरु भयो? यी समाधानहरू लागू गर्नुहोस्
विन्डोज १० शुद्ध फ्रेमवर्क 3.5. Installation स्थापना त्रुटि ०x800f0906, ०x800f081f
तपाईको व्यवसायलाई यी १० साइबर सुरक्षा सल्लाहको साथ सुरक्षित राख्नुहोस्
Windows तर 'Windows स्लीप मोड मुद्दाबाट उठ्न सक्दैन' लाई ठीक गर्ने ways तरिकाहरू
विन्डोज किन सधैं अपडेट हुँदैछ
सुविधा अपडेट स्थापना गर्न असफल भयो
विन्डोज १० लगइन पछि स्वागत स्क्रिनमा अड्कियो
ITunes यस आईफोन त्रुटि 0xe80000a मा जडान हुन सकेन
itunes विन्डोज १० मा साइन इन गर्न सक्दैन